octobre 2018 - Page 34 sur 69 -
12/10/2018 admintriatra 0
Manahy mafy ny amin’ ny mety hiverenan’ny fanondranana andramena ireo fiarahamonim-pirenena, misehatra amin’ ny tontolo iainana tahaka ny “Alliance Voary Gasy”, amin’ izao fotoanan’ny fampielezan-kevitra izao. Na dia teo aza ny fanatsarana tokony hoentina anatin’ …Tohiny
Fivoriana an-tampon’ny Frankôfônia : Voaresaka ny fanohanana an’i Madagasikara
Nanomboka omaly 11 oktobra hatramin’ny anio 12 oktobra, any Erevan, Arménie, ny fivoriana an-tampon’ny Frankôfônia, na ireo firenena miteny sy mampiasa manontolo, na amin’ny ampahany ny teny frantsay. Anisan’ireo firenena mandray anjara amin’izany i Madagasikara …Tohiny
Nisy namefy ny tany ao anatin’ny tobim-piantsonana Andohatapenaka. Malahelo ireo mpitatitra sy ny mpitantana, ka mangataka ny hamerenana izany ao anatin’ny 48 ora. Mipetraka ny sora-baventy. “Tsy ekenay mpitatitra ny fanomezana ny tany ho an’olon-kafa, …Tohiny
Nilaza ho vonona handray ny tsikeran’ireo kandidà amin’ny tsy fahatomombanan’ny fikarakarana ny fifidianana ny CENI. Nilaza ny efa miantso, ary hamory azy ireo araka izany ity rafitra mahaleo tena mikarakara ny fifidianana ity, amin’ny faran’ny …Tohiny
Ny minisitra lefitra misahana ny Raharaham-bahiny Vietnamianina , SEM Hong Nam Vu no nialoha lalana ny fahatongavan’ny filoha vietnamianina Tran Dai Quang eto amintsika. Alina izy no nigadona teny amin’ny Aéroport Ivato. Hitokana ny masoivohon’i ...Tohiny